Ukucindezeleka kusanda kuba yisifo sokuthola imfashini ukuthi abesifazane ngokwayo babonisa ukubonakaliswa okuncane kokucindezeleka, ukunganakwa noma i-PMS. Nokho, ukucindezeleka akuyona nje isimo sengqondo esibi. Lesi yisifo esiyingozi kakhulu, esingabonakali ukubonakaliswa okungokomzwelo kuphela, kodwa nezimpawu ezithile zomzimba. Sekuvele sekukwazi ukuzuza isifo sengculazi, kube yizifo ezibiza kakhulu emhlabeni wonke, ukubeka amarekhodi okufa futhi kufanelwe ukuthola isihloko esithi "Ingxabano yekhulu lama-XXI". Ungangeni ezinkampanini ezidabukisayo zemiphumela yokucindezeleka kuzosiza u-debunk ukuphazamiseka ngakho futhi ukwazi amaqiniso, ngokuvamile athule.
Ukucindezeleka kwabesifazane akusona isimo sengqondo, kodwa isifo. Ngefomu elinganakiwe, linempawu ezibonakalayo njengalezo ezenzeka ezifweni zenhliziyo, isifo sikashukela, i-arthritis. Ngokuphathelene nokusabalalisa, ukucindezeleka kuthatha indawo yesibili eyingozi, ukunikeza indlela yesandla senhloko yesifo senhliziyo kuphela. Ngezimo ezinzima zokucindezeleka, abesifazane bawela ezikhungweni ezibucayi noma izibhedlela zesifo sengqondo. Esifweni esivame ukuba yisisusa sokuzibulala, izinyathelo zokuvimbela kanye nokwelashwa kufanele zisetshenziswe kuphela ochwepheshe. Ukuzivocavoca kanye nokwamukelwa okungalawulwa kwezidakamizwa zokucindezeleka okukhangisiwe kungenza isifo esiyingozi kakade sikwenze.
Ukucindezeleka kuzuzwe njengefa. I-Khandra nezinkinga zokucindezeleka zinezici zofuzo. Lesi siphetho senziwa ososayensi baseYale University ngemuva kokucwaninga kwemindeni engaphezu kuka-300 yaseMelika ehlushwa "manic-depression syndrome" (MDS). Izingane eziningi nazo zine "igciwane lokucindezeleka" emndenini onjalo. Ngenhlanhla, uxhumano lwezakhi zofuzo kanye nesimo sokucindezeleka kulandelwa kuphela ku-40%. Ama-60% asele ahlobene nezinye izici. Lokhu kusivumela ukuthi sithi ezikhathini eziningi ukucindezeleka kungaphathwa.
Abesifazane bathambekele ekucindezelekeni kunamadoda. Ucwaningo olwenziwa ososayensi baseMelika luqinisekisa ukuthi abesifazane bathambekele ekuzuzeni i-propensity yokucindezeleka. Amathuba okuba isisulu se "geni" esabekayo kuzo 42%, ngenkathi amadoda - 29% kuphela. Ukuthuthukiswa kokucindezeleka kwabesifazane nakho kuthinteka izici zomzimba zomzimba wesifazane. Kuma-hormone. Ebusheni, bobabili abafana namantombazane banenkinga yokucindezeleka ngendlela efanayo, kodwa ngemuva kokungena eminyakeni yobudala, amantombazane abe ozwela kakhulu, alamukele futhi ancike kakhulu ekuziphenduleleni kwemizwelo. Ukugqithisa kwengqondo kwabesifazane kuvame ukuphela kokucindezeleka.
Ngokuvamile, abesifazane abaneminyaka yobudala yokubeletha banenkinga yokucindezeleka. Lokhu kungenxa yezici zomzimba nezengqondo. Ngesikhathi sokukhulelwa, umzimba wesifazane ujwayele ukuguquka okungazelelwe kwamahomoni, okubangela isifiso sokushaywa yisifo ngo-10% wabomama abalindele. Abanye abesifazane abangu-20% bathola imizwelo engakaze ichazwe ngemuva kokubeletha. Abesifazane abangu-15% abaye bazalwa banesifo sokucindezeleka kwangemva kokubeletha, okubangelwa ukwehla okubukhali ezingeni le-hormonal. Isimo sengqondo somama osemusha siqhutshelwa phambili ngenxa yokuntula ukulala okuphelele, ukucindezeleka ngenxa yemithwalo yemfanelo emisha, ukuxilongwa kwe-hyperopiactivity yezingxabano ezisanda kuzalwa noma ezingaphakathi komndeni.
Ukucindezeleka kungaba uphawu lwesinye isifo noma kubonakale ngemuva kokuthatha imithi ethile. Ukuphelelwa yisikhathi isikhathi eside kubangelwa yizifo ezimbi (isibonelo, i-oncology, isifo sikashukela, ukuphazamiseka kwe-hormonal, isifo sikaLyme, njll.) Futhi okubonakala kungenabungozi, ekuqaleni kokubona, ukuvimbela imithi, imithi yokulala, ukuthula, njll, kungabangela izimpawu zokucindezeleka. kungase kube ukuntuleka kwezakhi kanye namavithamini emzimbeni, utshwala, ukusetshenziswa kwezidakamizwa. Uchwepheshe kuphela ongenza ucwaningo olunembile.
Ukucindezeleka kujwayele ukuphindaphindiwe. Isimo sengqondo esizinzile singaba yisiphetho ngaphambi kokubonakala okusha kokucindezeleka. Ngokwezibalo, owesifazane oyedwa kwabahlanu kuphela obhekene nokucindezeleka ngeke abuyele kule nkinga. Okuhlangenwe nakho konke okuphindaphindiwe kubuyeke ngokuhlala njalo. Kukhona izizathu eziningi zalokhu. Kodwa-ke, ochwepheshe abayinhloko babiza ukuzitholela noma ukwelashwa okungaphelele. Ungakhathaleli ukucindezeleka. Kungenxa yalezi zifo, okumele kwenzeke kuphela ngaphansi kokuqondiswa udokotela.
Izifo ezicindezelayo zelashwa kuphela ngendlela edidiyelwe. Ukwelashwa kokucindezeleka kuzosebenza kuphela uma kwenzeka inhlanganisela enekhono yenkambo ye-psychotherapy kanye namanani okhethwe ngamakhemikhali e-antidepressants. Ingcweti kuphela enganquma uhlobo nobunzima bokucindezeleka. Ukuphambuka kwe-Asthenic kuphathwa ngokugqugquzela, ukukhathazeka - izidakamizwa. Izidakamizwa ze-psychotropic ezizimele zingabangela ukuguqulwa komzimba, futhi kudlulisele lo wesifazane ekucindezelekeni okukhulu nakakhulu. Ukweqa ngokweqile ngemithi kuzothuthukisa ukucindezeleka kwesidalwa esivele sicindezelekile. Ukuqedela izinqubo ezijulile zesistimu yezinzwa kuzosiza izinhlelo zokwelapha zokwelapha okukhulumisana kanye nezinsizakalo ezikhethwe ngokukhethekile ze-neuroleptics nezokuthula, kanye nokudingeka esimweni ngasinye, amavithamini nezici zokulandelela.
Ukwelashwa kokucindezeleka sekuphela ekubuyiseleni kwamacala angu-90%. Isikhalazo sesikhathi esifanele ochwepheshe sinike ithuba lokuba iningi labesifazane liqede ukucindezeleka kuze kube phakade. Ingxenye yeziguli eziye zafaka isicelo sokunakekelwa okufanelekayo zilulame zingakapheli izinyanga eziyisithupha. Ukungazinaki izimpawu zokucindezeleka noma ukuzivocavoca kungabangela izinkinga zezempilo ezibi kakhulu, kubangele ukukhubazeka noma ngisho nokuholela ekufeni. Ukucindezeleka akuwona umusho! Uyisizathu esiyinhloko sokunakekela impilo yomphefumulo wakhe.
Ngokuphila nomculo, noma ukuthi umculo uthinta kanjani umuntu
Ukuzikhandla esimweni esicindezelayo
Izithiyo ezingenakuqonda okusivimbela ukuba singakhuli
Indlela yokuphatha indoda: imithetho yegolide e-7
Indlela yokuwa ngothando noYe: 4 imithetho ezosebenza nganoma isiphi isimo
I-cocktail yamapare ne-rosemary
Letha umzimba ngokuhlelekile: ukudla kokudla kwesisindo
Ukwelashwa kwe-ozone kwangaphakathi: izinzuzo, izinkomba, ukuphikisana
Shakarlama nge ama-alimondi
Ikhaya futhi elihle "umbuso wezinyoni"
I-milk cocktail ne-cherries
I-Curd pasta ngamakhambi
Ngokushesha futhi kumane: yakha i-hairstyle yomshado ngezinwele ezimfushane
Izimbangela zengqondo zokuphinga
Imilenze eyishumi emibi kakhulu eHollywood
Izimpawu kanye nokudla okunempilo nge-cystitis
Amazwe TOP-5 angadingi i-visa
Ukukhetha izingubo zomntwana entwasahlobo
Ukuphazamiseka kokulala kwengane: kuyingozi yini?